Hiran State - News: Qeybtii labaad shirkii London ee loogu magacdaray shirweynahii qurbo joogta reer Hiiraan.
Qeybtii labaad shirkii London ee loogu magacdaray shirweynahii qurbo joogta reer Hiiraan.
London:- Somalida oo marka ay meel iskugu yimaadaan ay inta badan horboodaan kuwa markaasi iyagu wax dulmiyey amaba jiil markaasi aduunyada u hor leh qalda mar hadeysan arag cid runta u sheegta ayaad moodaa in waayadan ay runta dib ugu laabanayaan siiba marka ay arintu gaarto meeshii markaasi munaasibka aheyd in laga sheego.
Shirkii labada maalmood socday ee ay horboodayeen Maxamud Ciise Turuji iyo C/qadir Xaaji Masale oo lahaa waxaanu nahay reer Hiirankii la yaqiiney ayaa ugu danbeyn ku dhamaday si aan aheyn sidii la filayey iaydoo marka laga soo tago wararka isku tuur tuurka ah hadane shirku ahaa mid laga lahaa dano siyaasadeed ayaa ugu danbeyn waxaa shirka uu waji kale yeeshay markii la waayey tiradii la qiyaasayey oo hoolkii loogu tala galay iney yimaadaan dad badan tiro aad uga yaabisay dadka London oo shirkaan loo xayeyesiinayey mudo 2 bilood ku dhawaad si kastana loogu sheegay ay soo xaadireen.
Hadaba shirka oo aanu si guud ugu dulmarnay qoraalkeenii hore ayaa hadane waxaa lagu heshiin waayey in la wada galo hal sawir dhamaan dadkii ka soo qeyb galay iyadoo sidoo kale qaabkii loo qori lahaa qodobada shirka leysku qilaafay oo dadku ugu danbeyn diideen in aan magacyadooda la soo qrin qodobada laga soo saarayo shirkana uu qodobka ugu danbeeyo noqdo Abaaraha inta kalena qodobo markaad aqriso nuxurkooda qofkii wax fahmayo dareemayo.
Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaa jawiga shirka maalintii 1aad bedelay oo labo qodob oo muhiim ah ka jeediyey halkaas mid ka mid ahaa waxgaradkii shirka ugu yimid waqooyiga Yurub ahaana midkii ugu daweynaa inta madasha shirka timid(ma hubno inuu ugu daweynaa laakinse waa shaqsi xog ogaal u ahaa waxii dalka ka dhacay 50kii sano ee ugu danebysay) waxuuna yiri. isagoo si gaar ah ula hadlayey shaqsiyaadkii shirka abaabulay qaarkood Hiiraan taariikhdiisa iyo in aad isku raadisaan reer Hiiraan waxaa ka horeeyo in marka hore 21kii sano ee kacaanka waxii Hiiraan ka dhacay iyo Laamiyeerigii 1994kii laga bililiqeystay Hiiraan raali galin laga bixiyo amaba isagaas xal loo helo horta yaan meel cidlo ah lagu boodine ninki odayga ahaane shirkii intaas ayuu ka yiri dibna uguma laaban.
Shaqsiyaadkii shirka abaabulayey oo markii horeba la ciir ciirayey ka soo qeybgalayasha oo aad u yaraa ayey hal mar ka gaartay maxaa qoorta idiin galiyey shirka noocaan ah. dadka qarkii isla markiba wey dareemeen in shirka laga leeyahay ujeedo gaar ah oo shaqsiyaad iyagu ay reerahooda wax dulmiyeen ay hada jiilka cusub doonayaan iney ka dhaadhiciyaan reer Hiiraan ayaan isku raadineynaa iyo wax la mid ah. iyadoo ay arintu halkaasi joogto ayaa mar kaliya hadane buuq ka dhashay kedib markii shaqsi walaalkii shirka ku jiray albaabka laga soo galo lagu weydiiyey inuu bixiyo 50 dolar kedibna daqiiqad kedib inta soo laabtay yiri lacagteyda haley soo celiyo shirku ma ahan sidaan moodayee, waxaana goobtii yimid ciidamda amaanka amaba Police lacagtiina waa loo celiyey shaqsigii.
Markii ay howshu halkaas mareyso ayaa la guda galay waxii dadka loo soo bandhigi lahaa. maadaama shirka labadii maalmood aysan dadku hal mar isla imaan waxaana leysla gartay maadama aysan jirin wax si rasmi ah leyskugu raacsan yahay in aan magacyada lagu soo daabacin mediyaha. liis horudhac ah oo ina soo gaaray ka bogo halka aanu magacyadii oo dhameystiran soo wadno.
1-Mohamed Goodax Bare
2- Mohamud Haaji Cilmi Guure
3- Liiban Sh Daahir
4-Ibrahim Xabeeb Nuur
5- Caasho-kiin Faarah Ducale
6-Hasan Dhagax Sandhool
7-Shamso Guled Cawale
Cabdi Cismaan Aden (saqiir)
Dhaqane Ibrahim Ali
Maryan Xaaji Cilmi
Waa aqiyaarta shirkaan inuu dhaco safka hore kaka jirtay sidoo kale waxaanu ka xusi karnaa
8-Cabdi CIlmi Ahmed (Abdi dheere)
9-Cabdi Cumar Faruur
10-Ali Abdulle Guure
11-Aweys Mohamed Waasuge
12-Ali mohamed Arab
13- Cabdi Afrax Guure
14-Shamso Bashir Macalin
15-Fardowsa Abdulle Guure
16- Ibrahim Macalin Kutub
Somalidu waxey tiraahdaa wadaad iyo qofweynba sidey wax u arkaan uma sheegaan shirkii natiijadii ka soo baxday waxey noqotay iyadoo midba midka kale eegayo in intii markaas is rabtay ay ugu yaraan dhawr sawir wada galaan, siyaasada Somaliya waa midabyo badan tahay tanina waxey qeyb ka tahay kuwii aanu horey u soo arki jirnay ayuu yiri mid ka mid ahaa ka qeyb galayaashii shirka oo diiday in lacag ijaarka hoolka lagu bixiyo laga qaado diiday taasi bedelkeedana yiri waxaan u dirayaa dadka ay abaarahu ku dhufteen Hiiraan madama ururkan noqday mid siyaasadeed.
Ugu danbeyn la soco liiska qeybtiisa danbe oo dhameystiran dhawaantan.
· admin on July 28 2011 07:16:47 · 0 Comments · 3022 Reads ·
14,667,532 unique visits